I-China N, N-dimethylcyclohexylamine, FENTACAT 8, CAS NO. 98-94-2 ， DMCHA / PC8 mveliso kunye nabenzi | Imichiza yaseKerui
Igama lorhwebo: DMCHA / PC8
I-FENTACAT 8 DMCHA PC8
N, N-dimethylcyclohexylamine (FENTACAT 8, DMCHA, PC8) Eyona njongo iphambili kukunxibelelanisa amagwebu e-polyurethane aqinileyo. I-N, N-dimethylcyclohexylamine（I-FENTACAT 8, i-DMCHA, i-PC8） i-viscosity esezantsi kunye ne-amine catalyst esebenzayo esebenzayo esetyenziselwa iifriji, iipleyiti, ukutshiza, kunye nokufakwa kwisiza kufakelo lwamagwebu e-polyurethane aqinileyo.
I-N, N-dimethylcyclohexylamine（I-FENTACAT 8, i-DMCHA, i-PC8）inefuthe lokunyanzeliswa kwe-gelation kunye ne-amagwebu, kwaye ibonelela ngokusebenza okuthe kratya kokulungiswa kwegwebu nokusabela kwe-gelation yempuphu eqinileyo.
I-N, N-dimethylcyclohexylamine（I-FENTACAT 8, i-DMCHA, i-PC8）ine-catalyst eyomeleleyo yokuphendula kwamanzi kunye ne-isocyanate (impendulo enegwebu), kwaye kwangaxeshanye Impendulo ye-polyol feather isocyanate nayo ine-catalysis ephakathi.
I-N, N-dimethylcyclohexylamine（I-FENTACAT 8, i-DMCHA, i-PC8） sisixhobo sokuqala esomeleleyo sokusabela kugwebu. Ukongeza kwigwebu elilukhuni, inokusetyenziselwa njengearhente egwebu encedisayo ekubumbeni igwebu elithambileyo kunye ne-foam eqinileyo. Inentsebenzo ezinzileyo kwizixhobo ezidityanisiweyo, uhlengahlengiso olukhulu, kunye nokugcinwa kwexesha elide.
I-N, N-dimethylcyclohexylamine（I-FENTACAT 8, i-DMCHA, i-PC8）ipakishwe kwi-170 kg / igubu; igcinwe kwindawo epholileyo kwaye engenisa umoya ezindlwini, ikhuselwe kubumanzi kunye nokuvezwa lilanga. Ixesha lokugcina liinyanga ezili-12.
I-N, N-dimethylcyclohexylamine（I-FENTACAT 8, i-DMCHA, i-PC8）Yimichiza yokuhlangana kwezinto eziphakathi. Nceda uphephe ukudibana namehlo kunye nolusu ngexesha lokusebenzisa. Ukuba kukho unxibelelwano, nceda uhlambe ngamanzi kwaye uthumele kugqirha ukuze afumane unyango.